ထိုင်းနိုင်ငံမှ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြသည့် စစ်ဘေးရှောင်များကို ထိုင်းပညာရှင်များက သြဂဲနစ် ? - Yangon Media Group
လေးကေ့ကော်၊ မေ ၁
ထိုင်းနိုင်ငံ ရောက် စစ်ဘေးရှောင် ပြည်သူများ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေသည့် ကရင် ပြည်နယ် မြဝတီမြို့နယ် လေးကေ့ ကော်မြို့သစ်မှ ဒေသခံပြည်သူများ အနေဖြင့် သြဂဲနစ်သီးနှံများ စိုက် ပျိုးနိုင်ရန်အတွက် ကရင်ပြည်နယ် အစိုးရနှင့် နိပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းတို့ပူးပေါင်း၍ သြဂဲနစ်စိုက်ပျိုးနိုင်ရန် အတွက် ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရနှင့် နိပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းတို့ ပူးပေါင်း၍ သြဂဲနစ်စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်းကို ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးနေကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါလေးကေ့ကော်မြို့ သစ်ကို ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်တွင်စတင် တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး လက်ရှိ အချိန်အထိအိမ်ခြေ ၆၈ဝ၌ လူ ဦးရေ ၂၇ဝဝ ခန့်နေထိုင်ကြကာ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုတစ် ပိုင်တစ်နိုင်လုပ်ကိုင်နေကြသည်။ ”ဓာတုဗေဒပစ္စည်းတွေအ သုံးမပြုဘဲ သြဂဲနစ်နည်းစနစ်နဲ့ စိုက်ပျိုးနည်းတွေကို စနစ်တကျ သင်ကြားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ လေး ကေ့ကော်ကရွာသားတွေစီးပွား ရေးလုပ်ငန်းအနေနဲ့တစ်ပိုင်တစ် နိုင်စိုက်ပျိုးရာမှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်စေတဲ့အသီးအနှံတွေကို သြဂဲနစ်စိုက်ပျိုးရေးနည်းနဲ့စနစ် တကျစိုက်ပျိုးတတ်အောင်လာ ရောက်သင်ကြားပေးတာဖြစ်ပါ တယ။် ဒီလိုသင်ကြားပေးနိုင်အောင် ဂျပန်နိပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ ကရင် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တို့က ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးတာပါ”ဟု သင်တန်း နည်းပြဆရာထိုင်းနိုင်ငံသားဖြစ် သူ မစ္စတာကိုမင်းကပြောကြား သည်။ လေးကေ့ကော်မြို့သစ်၌ ထိုင်း နိုင်ငံမှစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများ အတွက် ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရ၊ ဂျပန်နီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်း၊ KNU၊ နှင့် နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီး ဌာန တို့ပူးပေါင်း၍ တည်ဆောက် ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
”သင်တန်းကတော့တစ်ပတ် ကြာတက်ရမှာပါ။ ဧပြီ ၂၆ ရက်က သင်တန်းစတင် ဖွင့်လှစ်ပါတယ်။ ဓာတုဗေဒနဲ့စိုက်ပျိုးတဲ့အသီးအနှံ တွေကို ရေရှည်စားသုံးမိတဲ့လူတွေ ဟာ ကင်ဆာရောဂါနဲ့အခြားရောဂါ တွေပါရရှိနိုင်တဲ့အတွက် မိမိတို့ ကိုယ်တိုင်ဓာတုဗေဒပစ္စည်းတွေ မသုံးဘဲ သြဂဲနစ်နည်းစနစ်နဲ့စိုက် ပျိုးတဲ့သီးနှံတွေကို စနစ်တကျစိုက် ပျိုးတတ်ပြီး ကျေးလက်နေပြည်သူ တွေကိုပြန်လည်သင်ကြားပေးစေ ချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီသင်တန်း ကိုတက်ရောက်သင်ကြားရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်”ဟု သင်တန်းသူတစ်ဦး ကပြောကြားသည်။ အဆိုပါသင်တန်းကို ထိုင်း နည်းပြဆရာများနှင့်ဧပြီ ၂၆ ရက် မှစတင်၍ မေ ၂ ရက်ထိတစ်ပတ် ကြာသင်ကြားပို့ချနေခြင်းဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ ရေနံ အလုပ်သမားအဖွဲ့မှ ဦးဆောင်၍ မန်းရေနံမြေ၌ အလုပ်သမားနေ့ကျင်းပ
JICA မှ ဂျပန်ယန်း ၁၅ ဘီလီယံခန့် ချေးယူရန် လွှတ်တော် သဘောတူ၊ SME လုပ်ငန်းများ ချေးငွေရရှိရေး စံသတ်??